Element सोडियम बारे 10 तथ्यहरू पाउनुहोस्
सोडियम एक प्रचुर मात्रामा तत्व हो जुन मानव पोषणको लागि आवश्यक छ र धेरै रासायनिक प्रक्रियाका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ सोडियम बारे 10 रोचक तथ्यहरू छन्।
सोडियम आवधिक तालिकाको समूह 1 सँग सम्बन्धित सिल्वर-सेतो धातु हो, जुन अल्ल्कली धातु समूह हो।
सोडियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील छ! शुद्ध धातु तेल या माटोसिन भित्र राखिएको छ किनकी यसले पानीमा आगो लगाउँदछ । यो नोट गर्न मनपर्छ, सोडियम धातु पनि पानीमा उड्छ!
कोठा को तापमान सोडियम धातु पर्याप्त नरम छ कि तपाईं यसलाई मक्खन चाकू संग कटौती गर्न सक्छन्।
सोडियम जनावर पोषणको लागि एक आवश्यक तत्व हो। मानवहरूमा, शरीर र सम्पूर्ण शरीरमा द्रव सन्तुलन कायम राख्न को लागि सोडियम महत्वपूर्ण छ। सोडियम आयनहरूले बनाएको विद्युत क्षमता तंत्रिका प्रकार्यको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
सोडियम र यो यौगिहरु को खाद्य संरक्षण को लागि प्रयोग गरिन्छ, परमाणु रिएक्टरों को ठंडा, सोडियम वापर लैंप मा, अन्य तत्वहरु र यौगिहरु को शुद्ध र परिष्कृत गर्न को लागि, र एक desiccant को रूप मा।
सोडियमको मात्र एक स्थिर आइसोटोप हो, 23 न।
सोडियमको लागि प्रती छ, जुन ल्याटिन नित्रीम वा अरबी नुनुन वा एक समान ध्वनि मिस्र शब्दबाट आउछ, सबै सोडा वा सोडियम कार्बोनेट को लागी ।
सोडियम एक प्रचुर मात्रामा तत्व हो। यो सूर्य र धेरै अन्य ताराहरू मा पाइन्छ। यो पृथ्वीमा छैटौं सबैभन्दा प्रचुर तत्व हो , जसको पृथ्वीको करिब 2.6% समावेश छ। यो सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा अल्ल्कली धातु हो ।
यद्यपि यो पनि शुद्ध मौलिक रूपमा देखा पर्न सक्छ, यो धेरै खनिजहरू मा पाइन्छ, हाइटाइट, क्रिस्टल, सोडा नाइट, जियोलाइट, एम्फिबोल र सोडलाइट सहित। सबैभन्दा साधारण सोडियम खनिज हाइटाइट वा सोडियम क्लोराइड नुन हो ।
सोडियम पहिले वाणिज्यिक रुपमा थर्मल कमी द्वारा 1100 डिग्री सेल्सियस मा कार्बन संग सोडियम कार्बोनेट को उत्पादन गरीएको थियो, डेभिल प्रक्रिया मा। शुद्ध सोडियम पिघन सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलीसिस द्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो सोडियम एलाइड को तापीय अपघटन द्वारा उत्पादित हुन सक्छ।
कैल्शियम कटिबद्ध तालिकामा कहाँ छ?
मानव शरीरमा भएका तत्वहरू र तिनीहरूले के गर्छन्
वर्णित सूची को तत्व
मानव शरीरमा के तत्वहरू छन्?
कुन पत्रलाई आवधिक तालिकामा भेटिएन?
रेस र ओस्सार मा कालो अभिनेता
5 डिमान्डरको डिस्टर्मिनर
इलस्ट्रेटेड पियानो चार्ट लाइब्रेरी
8 प्रमुख मुद्दा सामना गर्दै महिला आज
नमूना काठ बिक्री अनुबंध टेम्प्लेट
सबैलाई थाहा छ
स्टेज प्रबन्धक चेकलिस्ट: ऑन-साइट अनिवार्यहरू
दुईवटा नटकोट्रेल ब्यालेट
जॉन क्लीजको आजादी को रद्दीकरण को सूचना
घडी र कर्टेस
तितलियों र माठ, आदेश लेपिडोप्टर
नाजिस र महिला: किन्डर, कुचे, किरी
जवान मान्छे को लागि हो Hobbit को सर्वश्रेष्ठ संस्करण
यहोवाका साक्षीहरूले विश्वास गर्छन्
नियन्त्रण बनाइ प्रयोगात्मक समूह: तिनीहरू कसरी फरक हुन्छन्?
कसरी कन्जुगेट 'इन्टर्रोमप' ('इन्टरफुल' गर्न)
मास्टर्स पेर-3 प्रतियोगिता विजेता, रेकर्ड र तथ्याङ्क
रिकवरी कसरत कसरत
सुई कास्ट ट्री रोग - रोकथाम र नियन्त्रण